किन आए के भी राजन काठमाडौ ?
जुन ४, २००८
भाई फुटे गवार लुटे भनेझै हाम्रा दलहरुको सरकार बनाउने झैझगडा र किचलोबाट फेरी बिदेशीले चलखेल गर्न थालेका छन। नेपाली काग्रेस, एमाले र माओवादीको सत्ता किचलो परेका बेला आज नेपालका लागि पूर्व भारतिय राजदूत के भी राजन नेपाल...
के छ त माओवादीको गोप्य सर्कुलरमा ?
मे २५, २००८
पहिले राजा फाल्ने अनि सत्तामा जान तयार देखिन्छन माओवादीहरु। तर राजा फाल्नपनि सकिएन र सरकारमा जानपनि दिएनन वा सकेनन भने के गर्ने ? के त्यत्तिकै चुप लागेर बस्छन त ? अवश्यै बस्दैनन। त्यसो भए गर्लान के त...
कहाँनेर चुकेका छन डा. भट्टराई ?
मे २२, २००८
यहि जेठ ६ गते अथवा अप्रिल १९ का दिन डा बाबुराम भट्टराईका अति निकट विश्वदिप पाण्डेको कान्तिपुर दैनिकमा एउटा लेख आयो। लेख लेख आफैमा त्यति बलियो र स्पष्ठ त देखिदैन। तर त्यसमा पार्टीभित्र सत्ताकालागि तिब्र विवाद छ...
श्रेष्ठ हत्याकाण्डमा राजनितिक रंग भर्दै छन एमाले कांग्रेस
मे २१, २००८
कोटेस्वरका ब्यापारी रामहरी श्रेष्ठको हत्याकाण्डको जति बिरोध र भर्त्सना गरेपनि पुग्दैन। यो जघन्य अपराधको माफी मागेकै भरमा माओवादीले उम्किन पाउनुहुन्न। सत्तामा बसेको पार्टीले उसका भगिनि संगठनमार्फत देशको कानुन हातमा लिने छुटपनि छैन। सगठनबाट निष्काशन गरियो, आन्तरिक कारवाही...
चुनौतिका थुप्रामाथि झलनाथ खनाल
मे १६, २००८
लगातार १४ वर्ष एमाले न्त्रित्वको प्रमुख पदमा रहेका माधव कुमार नेपालले आफ्नो राजनितिक यात्रा मात्रै सकेनन। पार्टीकोपनि चुलिएको साखपनि सके। अब पालो आएको छ झलनाथ खनालको। वास्तवमा एमालेमा सम्भावित दाबेदारहरुको निर्वाचनमा पराजय भएपछि उनी एक्लो प्रतिष्पर्धी बने...
राजापनि वार्ता गर्ने मनस्थितिमा !
मे १०, २००८
नेकपा (माओवादी) ले राजा ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटी राजदरबार छोड्न सन्देश पठायो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राजालाई सम्मानजनकरुपमा गद्दि त्यागेर सामान्य नागरिक सरह राख्नका लागि आवश्यक परे आफु राजासँग सिधै वार्ताकालागि तयार रहेकोपनि बताए। त्यसकालागि राजाका निकट रबिन्द्र शर्मा, कमल...
माओवादी माग खोस्ने भारतिय योजना !
मे ५, २००८
स्वायत्त प्रदेशको माग माओवादीले निकाल्यो। सबै भाषा, भाषी र भाषिकाले समान अधिकार पाउनुपर्छ भनेर उराल्ने माओवादीनै हो। जातिय स्वायत्तता माओवादीकै माग हो। तर आफैले निकालेको, परिचित गराएको माग माओवादीले तराईमा जोगाउन सकेन। एउटा गैर्‍ह सरकारि संस्थाकारुपमा दर्ता...
को को हुन त माओवादीका तिन शक्तिशाली मन्त्री ?
मे ३, २००८
नेकपा (माओवादी) को नेत्रित्वमा सरकार बन्न नदिए जनतामाझ गएर जनताले जे आदेश दिन्छन त्यहि गर्ने भनिसके माओवादीले। सबैभन्दा ठुलो दलका हिसाबले माओवादीलेनै आगामि सरकारको नेत्रित्व गर्ने भनेर अड्डी पनि कसेका छन। माओवादी नेत्रित्वको सरकारमा जान आनाकानी गरे...
माओवादी फसाउने यस्तो पो रहेछ बिदेशी योजना
मे २, २००८
धेरै पछि आज यसो एमएसएन खोलेको त लामो समयसम्म भेट नभएका एक जना माओवादी मित्रसँग भेट भयो। निर्वाचनका बारेमा यसो जिज्ञासा राख्दा उनले माओवादीलाई हराउने बिदेशी योजना थियो भन्न थाले। निर्वाचन त सकियो नै तर निर्वाचनका बारेमा...
अब घोक्रेठ्याक हुने पालो कांग्रेसको
अप्रिल २६, २००८
नेपाली कांग्रेसभित्र असल मानिसहरु छैन भन्नु हुँदैन पक्कै पनि। तर मुल रुपमा त्यो पार्टीको नेत्रित्व सत्ता बाहिर बस्नै सक्दैन। शक्तिबाट उ अलग हुनै सक्दैन। यो कुरा अघिल्ला ब्लगहरुमा पनि पटकपटक उल्लेख भएकै हो। सत्ताबाहिर बस्यो कि अस्तित्व...